ओठ, जिब्रो र मुखमा बारम्बार किन घाउँ आउँछ ? - ramechhapkhabar.com
ओठ, जिब्रो र मुखमा बारम्बार किन घाउँ आउँछ ?
अधिकाशं मानिसको मुख, जिब्रो तथा ओठमा स–साना बिबिरा, फोकाफोकी आइरहने हुन्छ । कसैको जिब्रो, कसैको ओठ, कसैको गिजा प्राय घाउँ भइरहन्छ । जसले खाना खान, बोल्न समेत समस्या हुन्छ ।
शरीरमा पोषणको कमी हुदाँ, भिटामिन बी, सी, आइरन तथा प्रोटिनको कमीले मुख, ओठ तथा जिब्रोमा घाउ आउँछ । यस्तै खाद्य विषाक्तता, सुर्ति, पानमसला, मद्यपान, र धुम्रपानका कारण ब्याक्टेरिया तथा फङगसको संक्रमण, बढि तातो र मसला, बढि अम्ल भएको खान पानको कारणले पनि मुख, ओठ, जिब्रोमा घाउ आउँछ ।
– प्रशस्त पानी पिउने । – बढि चिसो वा तातो नखाने, नपिउने । – फलफूल तथा साग सब्जी राम्ररी चपाएर खाने । – मनतातो पानीमा पिटकिरी मिसाएर दैनिक ३ पटक कुल्ला गर्ने । – चिल्लो पदार्थ बढि नखाने । – बिहान–बिहान उम्रको गेडागुडी खाने । – घाउ भएको ठाउँमा मह लगाउने । – निमको पात चपाउने । – बदाम भिजाएर खाने । – पानीमा तुलसीको पात राखेर कुल्ला गर्ने ।
यसका बावजुद बारम्बार समस्या भइरहेमा चिकित्सकको परामर्श लिने । विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा
– पहिलो चोटी आमा हुन लागेको महिलाले आफ्नो हरेक कुराको ख्याल गर्नु पर्दछ । – यो अवस्थामा सन्तुलित आहार खानु निकै आवश्यक र महत्वपूर्ण हुन्छ । – सामान्यतया गर्भावस्थामा फास्टफुड र फ्रोजन खाने कुरा खानु हुदैन । – यो बेला धेरै दिनसम्म राखेका खानेकुरा पनि खानुहुदैँन । – बढी नुन प्रयोग भएको खाना खादाँ शरीर सुन्निने र उच्च रक्तचाप हुने सम्भावना हुन्छ ।
–गर्भावस्थामा घ्यूकुमारीको प्रयोग गर्नाले रक्तश्राव हुने सम्भावना बढी मात्रामा हुन्छ । – माछामा पारो धातु पाइने भएकाले यसको सेवन आमा र बच्चा दुबैलाई घातक हुन्छ । – भुँईकटहरमा ब्रोमलिन हुन्छ । तसर्थ यसको सेवन गर्नाले प्रसव पीडा हुने हुन्छ । –अण्डामा साल्मेनोला स्पिसज ब्याक्टेरिया हुन्छ, यसले इन्फेक्सन गराउने सम्भावना हुन्छ ।
– अण्डा पचाउन पनि कठिन हुन्छ । – हरियो आलुमा सोलेनिन एन्जाइम पाइन्छ । जसका कारण गर्भपतन हुने सम्भावना हुन्छ । – मदिरामा सुगर बढी हुन्छ, गर्भावस्थामा मदिरा सेवनले गर्भपतनको सम्भावना हुन्छ । – जंकफुड सेवन गर्नाले शरीरमा न्यूट्रिएट्सको कमी हुन्छ ।